Digniin laga soo saaray weerar Shabaab la damacsan yihiin diyaaradaha shacabka ee Hawada Kenya | Xaysimo
Home War Digniin laga soo saaray weerar Shabaab la damacsan yihiin diyaaradaha shacabka ee...
Digniin laga soo saaray weerar Shabaab la damacsan yihiin diyaaradaha shacabka ee Hawada Kenya
Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay digniin culus oo ku aadan weerar ay kooxda Al-Shabaab damacsan tahay inay la beegsato diyaaradaha isticmaalo Hawada Dalka Kenya.
Digniintaan ayaa waxaa soo saartay Hay’adda Duullimaadka Hawada Mareykanka ee loo yaqaan FAA kadib markii ay heshay xog ku saabsan qorshaha ay Al-Shabaab ku dooneyso inay ku weerarto diyaaradaha kala duwan ee adgeesada Hawada dalka Kenya.
Warbixinta ay soo saartay FAA ayaa lagu sheegay inay kooxda Al-Shabaab qorsheeneyso inay fuliso weeraro ka dhan ah Diyaaradaha isticmaalo Hawada Kenya iyadoo adeegsaneyso lidka diyaaradaha, Hoobiyayaasha iyo hubka fudud ee gaari kara Fl260 joogga dhulka.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in weeraradaan ay dhici karaan marka diyaaradaha ay degayaan ama duulayaan oo ay dhulka aad ugu dhowyihiin.
Hey’adda FAA ayaa ku baaqday in si deg deg ah loo adkeeyo ammaanka hawada Kenya si looga fogaado weerrada ay qorsheeneyso kooxda Al-Shabaab.
Hey’adda ayaa ku baaqday sidoo kale inay diyaaradaha muujiyaan taxadar dheeraad ah isla markaasna ay iska ilaaliyaan inay ku duulaan jawi hoose si looga fogaado weeraradaas qatar ah ee kusoo fool leh.
Hey’adda ayaa xustay inay digniintaan dib u eegis ku sameyn doonto 26ka Bisha February ee sanadkan 2020.
Digniinta kasoo baxday hey’adda FAA ayaa kusoo aadeyso xilli ay Al-Shabaab laba jibaareen weerarada ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya.
Al-Shabaab ayaa horey wacad ugu martay inay joojin doonin weerarada ay ka fuliyaan gudaha Kenya inta ay ciidamada Kenya isaga baxayaan gudaha Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa waxaa Soomaaliya ka joogo ciidamo badan oo ka tirsan howlgalka Midowga Africa ee AMISOM kaasoo Soomaaliya ka socdo in ka badan 10 sano, waxayna dowladda Kenya sheegtay inaysan ciidamadeeda kala bixi doonin Soomaaliya inta laga ciribtirayo Al-Shabaab.
Qoor Qoor oo magacaabay xubnaha guddiga doorashada (Aqriso Magacyada)
NORWAY oo aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya, dibna u fureysa safaaradeeda Muqdisho
Tigray: 3 maalmood ayaan lugeeynayay si aan wiilkayga isbitaal ugu helo
Nin loo xidhay in uu cunay hooyadii
Puntland oo sheegtay in ay qabsatay taliskii Al-shabaab ee Gobolka Bari
Ra’iisul wasaare Rooble oo isbitaalka ku booqday dhaawacyada Qaraxii Muqdisho
Israel oo mar kale duqaysay marinka GAZA
Taliye Odowaa oo war ka soo saaray qaraxii is-miidaamintii ahaa ee...
Wararkii u dambeeyey qaraxii ka dhacay Muqdisho
DF oo golaha ammaanka u gudbisay dacwad xasaasi ah oo ka...
Ethiopia oo shaaca ka qaaday hay’ado qorsheynayey inay si hoose hub...
Khasaare ka dhashay dab xooggan oo xalay qabsaday suuqa weyn ee...
Shiinaha: Lama joogo xilli kooxo yar ay dunidu maamulaan